Soosaarayaasha & Qalabka Soo Saarayaasha | Shiinaha Warshadda & Qalabka Qalabka & Alaab-qeybiyeyaasha
Isku xirka PCB ee qalabka baaritaanka baabuurta
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee qalabka baaritaanka baabuurta. Warshadaha baabuurta waxay leeyihiin shuruudo aad u adag marka laga hadlayo howlaha iyo howlaha, tayada iyo waqtiga la keenayo. Kuwaas oo dhammaantood ahmiyado iyo udub dhexaad u ah xeerarka hawlgallada Asteelflash, adduunka oo dhan. Maaddaama aan nahay shirkad elektaroonig ah iyo soosaaraha PCBA-ga, annaga, haddaan nahay Pandawill, waxaan bixinnaa adeegyo tayo sare leh oo xagga injineernimada ah, qaabeynta iyo qaabeynta ah.
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee qalabka falanqaynta kiimikada. At Pandawill, fahamkeena tiknoolajiyadeena tijaabada ah wuxuu naga dhigayaa lammaane gaar ah oo loogu talagalay ganacsiga qalabaynta iyo cabirka waxaanan u keeneynaa xalal shirkadaha hormoodka ah ee adduunka.
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee USB Explorer USB 3.0 iyo Nidaamka Tijaabada 2.0. At Pandawill, fahamkeena tiknoolajiyadeena tijaabada ah wuxuu naga dhigayaa lamaane gaar ah oo loogu talagalay ganacsiga qalabaynta iyo cabirka waxaanan u fidineynaa xalalka shirkadaha hogaaminaya adduunka.